Manchester City oo dhiggeeda Manchester United kula tartamaysa saxiixa xiddig ka tirsan Kooxda Marseille – Gool FM
Maxay tahay abaal-marinta uu ku guuleystay xiddiga Manchester City ee Kevin De Bruyne?
Bayern Munich oo diyaar ah inay qasnadaheeda u jebiso da’yarka Barcelona ee Pedri… (Waa immisa lacagta ay ku dooneyso wiilka-dahabiga?)
Sergio Ramos oo ka jawaabay su’aal la xiriirtay haddii uu doonayo in Lionel Messi uu ku guuleysto abaal-marinta Ballon d’Or
Goobta iyo goorta lagu balansan yahay Ballon d’Or, xiddiga hoggaanka u haya tartanka & Wax walba oo aad uga baahantahay abaal-marinta Kubadda Dahabka
(Manchester) 06 Maajo 2020. Sida wararku ay sheegayaan Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa soo gashay tartanka loogu jiro saxiixa da’yarka naadiga Marseille ee Boubacar Kamara, kaasoo ay horay u xiiseynaysay Manchester United.
20-sano jirkaan ayaa 24 kulan ku soo bilowday safka hore kulammada horyaalka Ligue 1 xilli ciyaareedkan, saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ayaana horseedi kara in Marseille ay diyaar u ahaato dhageysiga dalabyada u imaanaya ee ku aaddan saxiixa laacibkan.
Sida ay warinayso Jariiradda Le 10 Sport, Man City ayaa da’yarka reer France u aqoonsatay mid macquul ah oo wax ku soo kordhin kara safka kooxdooda.
Kamara waxa uu awood u leeyahay inuu ka ciyaaro daafaca dhexe iyo khadka dhexe ee burburinta, taasoo laga yaabo inay Sky Blue ka dhigto bedel la mid ah Fernandinho.
Si kastaba ha noqotee, Manchester United iyo Chelsea ayaa sidoo kale la sheegayaa inay isha ku hayaan xaaladda xiddigan ka hor suuqa kala iibsiga ee soo aaddan.
Kamara ayaa haatan qandaraaskiisa waxaa uga harsan kaliya labo sano, isagoo siinaya Marseille xoogaa lacag ah marka uu u yimaado dalab qaali ah.
Kooxda Manchester United oo dooneysa in Aaron Ramsey qeyb looga dhigto heshiiska Paul Pogba